नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोका पुरिएर गएराति प्यूठानमा दुई परिवारका आठ जनाको जनाको मृत्यु
अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोका पुरिएर गएराति प्यूठानमा दुई परिवारका आठ जनाको जनाको मृत्यु
अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोका पुरिएर गएराति प्यूठानमा दुई परिवारका आठ जनाको जनाको मृत्यु भएको छ । पहिरोले घर पुरिँदा प्यूठानको रजवारा गाविस वडा नं. ३ नेटाका ४० वर्षिय दुर्गबहादुर मल्ल, उनकाी ३७ वर्षिय श्रीमती सीता, छोरीहरु १० वर्षिय सुशिला, डेढ वर्षिय लेखा र सात वर्षिय सिर्जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । छिमेकीको बस्न गएका तीन छोरा र एक छोरी भने सकुसल रहेको रजवाराका स्थानीय तथा पत्रकार महासंघ प्यूठानका सचिव महावीर रानाले जानकारी दिनुभयो । यस्तै पूँजा गाविस वडा नं. ३ बाग्लीवाङ्गमा हुमबहादुर सुनार उनको श्रीमती र सात वर्षिया छोरीको मृत्यु भएको प्यूठान प्रहरीले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्त, प्यूठान प्रहरी प्रमुख रञ्जित सिंह राठौर, नेपाल रेडक्रलस सोसाइटी लगायतको टोली अहिले विहानै रजवारा घटना स्थल पुगेको छ । घटना स्थल प्यूठान जिल्ला सदरमुकामबाट १७ कोष टाढा पर्दछ । बाढी पहिरोकै कारण प्यूठान बरौंला गाविसमा झिमरुक नदि किनार उदिक र हरियाटारीको वीचमा कुलो निर्माण गरिरहेका रोल्पाका सात जना कामदार नदीवीचको टापुमा फँसेका छन् । उनीहरुको
उद्धार हुनसकेको छैन ।
उता जिल्लाको स्याउलिवांगमा रहेको सरिमाखोला लघु जलविद्युत परियोजनाको कुला बगाएको छ । पहिरोले करिव दुई सय मिटर कुलो बगाउँदा आयोजना बन्द भएको छ । स्याउलिवांग वडा नं. १, २ र ३ का २५० घरधुरले उक्त लघु जलविद्युतको उपभोग गर्दै आएको स्थानीय तथा उपभोक्ता समितिका सचिव शेरबहादुर सेनले जानकारी दिनुभयो । अविरल वर्षाकै कारण अर्खा गाविस वडा नं. ३ मा रहेको कोर्चेघाट खोलामा बाढि आउँदा तीन वटा झोलुंगे पुल बगाएको छ । पुरानो एउटा पुल, २०६४ सालमा बनेको पुल र अर्काे निर्माणाधिन झोलुंगे पुलबगाएको स्थानीय मित्र थापाले जानकारी दिनुुभयो ।